License Services Licensing - Mamiriyoni Macheki
Yako Wepasi Pose Mubatana mu 106 NYIKA
Kumbira Quote Zvino
Inokutungamira iwe mune rezinesi (ma) uye mvumo (s) inodiwa nebhizinesi rako. Tungamira nekurayira kuraira rezinesi / mvumo yekunyoresa mafomu ane magwaro anotsigira anodikanwa.
Tungamira nekurayira kuraira rezinesi / mvumo yekufambisa mafomu ane anotsigira magwaro anodikanwa uye kuendesa mari yehurumende nekukurumidza kuita maitiro ekupa marezinesi ebhizinesi.
Boka redu revaridzi ekupa marezinesi vanokutungamira iwe mukutevera zvinounzwa uye zvinowedzerwa, kuti, iwe ugone kutarisa pane rako rebhizimusi repamutemo.
Basa RokufambisaRubatsiro rwekufambaChibvumirano ChebasaBhizinesi KutamaKutama KwemhuriKwenguva pfupi KugaraKugara KwechigarireCitizenshipInvestor Immigration ChirongwaVisa ServicesKuumbwa KwekambaniBank AkavhuraServices Real EstateInternational Bhizinesi Setup uye KuwedzeraMhinduro DhizimisiKuumbwa KwekambaniShelf CompaniesBank AkavhuraBhizinesi KutengesaMa Merchant accountBhizinesi rekuTengaVirtual HofisiVirtual NhambaNhare dzeSoftwareMaakaundi OutsourcingBhizinesi LicenseTsika YekunyoresaYakagadziriswa WebhusaitiLogo KugadziraCRM SolutionDzidzo YekudzidzisaKutenderwa KutungamirirwaYunivhesiti KubatanidzwaKunyoresaZvemutemo ZanoTenga Pakeji YemutemoBook an AppointmentchimbichimbiYakasarudzika HR SolutionsTalent KuwanikwaKuvhara MusoroHR KukurukuriranaBasa OutsourcingJobho WebhusaitiIT SolutionsWebsite DesigningWebsite DevelopmentKubudirira kweEcommerceMobile App DevelopmentSoftware DevelopmentBlockChain KubudiriraTsvaga Engine OptimizationDigital MarketingVOIP MhinduroTenga Nhamba NyowaniYepamusoro-Up AkauntiKubata Center SolutionsVoIP Nyowani ChinjaVoIP Tunneling SoftwareMhinduro Kune CorporateZvemari KubvunzaTendeudza kutenderedza ConsultancyEquipment Kupedza MariKushanda CapitalKukosha kweBhizinesikutevedzeraBook an AppointmentKutanga Tsigiro uye MhinduroPartnership ChirongwakunyoresaKubvunzana MubvunzoBhadhara kunzeMahara ServicesJobho Nzvimbo PortalYakarongedzwa PortalReal Estate PortalYemagariro Network PortalBook an AppointmentOther Services
Vatengesi Vokunze Kwekunze, Rezinesi reAset Management, Ruzhinji mutual fund, Rezinesi reInvestment Bank, rezinesi reSandbox, Rekudyidzana Investment Scheme & Rezinesi reFund, Mari Yekutamisa uye Kubhadhara Kwekubhadhara, Rezinesi-Inoshanda Inoshanda (SBO) Rezinesi, Mubatsiri webasa rekubhadhara, Sangano Rekudyara Rakabatanidzwa (Cis & License yeFund, Rezinesi Rekubhadharira Rezinesi, Kunyoreswa kweFund Manager uye Administrator wemubatanidzwa mari, E-Mari & Kubhadhara Masangano, nezvimwe ...
Mamirioni Vagadziri kuburikidza nekudyidzana kwedu nedzimwe nyika uye Sangano nehunyanzvi hweLayisensi rinopa rutsigiro rwemvumo munyika dzataurwa pasi apa
Kutanga Bhizinesi ikozvino inopa mhinduro dzerezinesi munyika dzinotevera:
Isu tinotonga hombe yakakura kwazvo yevatengi vekunze vanoshanda mune dzese dzenzvimbo neyekudzokorora bhizinesi kubva kwavari, nekuchengetedza hukama hwedu hwakareba nevatengi vedu kwemakore mazhinji nekuda kwebasa redu kugona, tsitsi nekukwikwidza mitengo.
Zvinyorwa zvekushandisa rezinesi zvinosiyana kubva mukutonga uye mhando yeisensi yakanyorerwa. Asi magwaro ekutanga anodiwa rezinesi rebhizinesi anotaurwa pazasi:
1. Mafomu ekunyorera akanyatso zadza uye akasaina
2. Yakazara seti yezvinyorwa zvako zvekambani. Semuenzaniso: Chitupa chekupinza, Memorandum uye Zvinyorwa zveSangano, Vanyori veVatungamiriri, Vagovani uye maGosa kana zvinyorwa zvakafanana. Iko kambani yekunyorera iri inopfuura mwedzi gumi nemaviri, mune mashoma kutonga uye / kana zvichibva parudzi rwerezinesi uye rezinesi rebhizinesi 12 mwedzi, Chitupa Chekunamira Kwakanaka.
3. Uchapupu hwekubhadhara kwemari yepamutemo yepasirese
4. Yako kambani inoshanda bhuku remitemo uye remukati mhedzisiro uye maitiro zvinosanganisira kurongeka kwemakambani marongero, kugadzirisa njodzi uye kurwisa-kurwisa mari marapiro uye maitiro, nezvimwe.
5. Bhizinesi Chirongwa pamwe ne3 kusvika kumakore mashanu emari kufungidzira.
ZVINOKOSHA PLEASE ONA
Ndokumbirawo mupe magwaro anotevera kune vese maDirector, Vanobatsira Varidzi, Vagovani, Vagumi Vanosaina signatories:
Seti yemutemo wekambani zvinyorwa zvinosanganisira:
Notarized kopi yepasipoti yavo inoshanda.
Pasipoti inofanirwa kusainiwa uye siginicha inofanira kufananidza siginecha pafomu rekunyorera.
Photograph inofanira kuve yakajeka uye yemhando yakanaka
Yekutanga kana Certified kopi yekushandiswa bhiri / bank bank statement (yekutarisa kero dzekugara, dzakanyorwa kwete anopfuura mwedzi mitatu). chikwangwani chekushandisa pamba (semuenzaniso magetsi, mvura, gasi, kana yakatarwa nharembozha asi isiri bhiri renharembozha, munzvimbo zhinji dzekutonga), neimwe nzira, iwe unogona zvakare kupa chirevo chebhangi, chirevo chekadhi rechikwereti kana tsamba yekutsvaga kubhangi (yakanyorwa kwete anopfuura mwedzi mitatu) seuchapupu hwekero.
Yekutanga kana yakasimbiswa kopi yeBhengi retsamba tsamba (yakanyorwa kwete kupfuura 3 mwedzi). Anenge mabhanga ese pasi rese anoburitsa "Refer Letter". Unogona kungokumbira Refer Letter kubva kubhengi rako, kwaunobata account. Tsamba yekureva inofanira kuratidza kusimbisa kwehukama nguva, hushoma makore maviri, Nhamba yeAccount, zviri nani kubvumirana pane iro zuva uye kutaurwa kwe "account account inogutsa".
Chairo kana rakasimbiswa kopi Professional reruzivo tsamba, inofanirwa kupihwa nekambani yehunyanzvi, semuenzaniso, odhita firm, CPA, Law Firm, nezvimwe zvichiratidza kusimbiswa kwehukama nguva, mashoma makore maviri uye votaura kuti "bhizinesi zviitiko zvinogutsa".
Simba reGweta (kana zvichiita)
Chibvumirano chekubvisa mapurisa
Incase, zvinyorwa zvakapihwa izvo zvisiri mumutauro weChirungu, mune izvo, shanduro dzakasimbiswa dzinodiwa, vice-a-versa, kune mashoma kururamisira.
Bhizinesi rezinesi rekupa masimba, panguva ipi neipi ingakumbira kutumira kwemamwe magwaro kana ruzivo, kana, ringaona sezviri madikanwa.
Vanotungamira kambani yekunyorera vanofanirwa kunge vari vanhu venyama.
Kambani yedu inopesana zvachose Kubvisa Mari, Kutengesa Zvinodhaka, Ugandanga uye Kubatwa kwevanhu, saka, HATIMI KUVIMBIRA VATengi.
1. Vanotengesa Kunze Kwekunze
1.1. Commodity Derivatives Chikamu: Binary Sarudzo, Ramangwana
1.2. Mari Yekunze Chikamu Chikamu: Forex License, Chengetedzo / Mhete yekutengesa License
2.1. Kubatanidzwa Kwekudyara Scheme (CI S): Imwe Fund
2.2. Yakavharwa-end fund
3. Investment Bank rezinesi
4. Kubhadhara Intermediary Services License
5. Sand Bhokisi License (Virtual Mari Yekutengesa License)
1. Mari Kuendesa uye Kubhadhara Kugadzirisa
2. Ruzhinji mutengo muhomwe
3. Kunyoresa kweFund Manager uye Administrator wemuviri mari
1. Services-Inoshanda Operator (SBO) License
2. Mari Service Vashandisi Licensing Guide
2. Singapore Yakachengetedzwa Kukosheswa Kituo (SVF) License
3. Rezinesi Rezvekufambisa
1. Kuchengetedza / Hodhi, Forex Licensev
1. Forex yekutengesa rezinesi
2. Kubhadhara mubatsiri webasa
1. E-Mari & Kubhadhara Masangano
Mazwi akakosha mune rezveMari rezinesi
Isu takaedza kutsanangura nekupa ruzivo rwekupa marezinesi masevhisi ane chekuita nemagadhi anodhura, akadhura masevhisi, emafemu emitemo, kuwana, vanachipangamazano vepamusoro, basa rakachipa, magweta anodhura, anodhura epasi rose, vanachipangamazano, magweta anodhura, masevhisi akanakisa, anodhura magweta, vanachipangamazano vepamusoro, vanachipangamazano vepamusoro, vanonyorera, vanachipangamazano, magwaro anodikanwa e, maitiro e, yakachipa pamutemo femu, mawaniro, magweta epamusoro, rezinesi rekuwana masevhisi e, mubhadharo, vanachipangamazano vepamusoro, magwaro anodiwa, mafemu emutemo anodhura , magweta asingadhuri, kumahombekombe, kuwana, s, mafemu emutemo asingadhuri e, anodhura chipangamazano, mubhadharo, maitiro e, masevhisi, akanakira mazano kune, zvakachipa, marezinesi ezvemari, akanakisa marezinesi, kunyorera, gweta rakanakisa, vanachira vanodhura, magweta epamusoro, magweta, mafemu epamusoro emitemo, magweta anodhura e, magweta akanakisa emitemo, magweta, epakarepo, akachipa akachipa mazano, akachipa akachipa mazano ekuti, akanakisa chipangamazano, apamazano epamusoro e, anodhura, epamutemo mafemu, akanakisa ultants, mutemo wepamusoro mafemu e, yakachipa yemutemo mafemu, epamusoro masevhisi, akanakira chipangamazano, akachipa anodikanwa chipangamazano, yepamusoro sevhisi, akanakisa magweta e, maitiro ekunyorera, epamusoro masevhisi e, epamusoro masevhisi, anodhura gweta, tora, akanakisa emutemo mafemu e, pamusoro chipangamazano, vepamusoro, vanachipangamazano vanopa mazano, zvakachipa, zvakachipa, varapi vanodhura, marezenisi ekuwana masevhisi, mawaniro, femu yemagweta akanakisa, maitiro ekuwana, magweta asingadhuri, mabasa akadhura, epasi rose, epasi rese, sevhisi yepamusoro , varapi vepamusoro, magweta epamusoro, magweta epamusoro, magweta epamusoro, akanyanya mazano, online, akanak vanachipangamazano, ekupa marezinesi masevhisi e, anodhura masevhisi, ekumahombekombe, akachipa emutemo mafemu e, epamusoro ma consultants.